Iikhosi ezili-13 zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo ethengisa izindlu kunye neziQinisekiso
Matshi 2, 2022 Chima Godswill
Eli nqaku liqulathe iinkcukacha zeekhosi zasimahla zokuthengiswa kwezindlu kwi-Intanethi onokuzithatha kwinduduzo yekhaya lakho okanye eofisini. Ukugqitywa ngempumelelo kwezi zifundo, uya kunikwa isatifikethi.
Ukufumana izindlu nomhlaba sisicwangciso senzuzo yotyalo mali. Abatyalomali bezindlu nomhlaba bangafumana ipropathi ngokuhlawula inxenye yexabiso lilonke ngaphambili kwaye bahlawule imali eseleyo kwixa elizayo kubandakanya inzala kunye nexesha elingaphezulu.
Amaxesha amaninzi, abantu abaninzi bacinga ukuba intengiso yezindlu yeyabarhwebi kunye nabathengisi kuba intengiso inkulu kakhulu kwaye inzima. Ngaphandle koko, abantu abaninzi benza imali eninzi kwizindlu nomhlaba. Ingeniso ayiveli kwintengiso yodwa kodwa ivela kuvavanyo, ulawulo lwepropathi, imali, ulwakhiwo, uphuhliso, ingcebiso, imfundo, njl.
Ke, ukuba ufuna ukuba nombono wentengiso yentengiso kunye nokuthengisa izindlu nomhlaba kwaye ube ngumtyali mali, bhalisa kwiikhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi. Into emnandi malunga nezi zifundo kukuba uya kunikwa isatifikethi emva kokugqiba ikhosi.
Yintoni iReal Estate?
Zithini iimfuno zokuba yiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba?
1. Jonga iimfuno zikarhulumente wakho
2. Thatha kwaye upase ikhosi yangaphambi kokwenza ulungiselelo
3. Thatha uze upase uViwo lweMvume
4. Sebenzisa iphepha-mvume lakho lokuthengisa izindlu nomhlaba
5. Cinga ngokuba nguRealtor
6. Joyina uMrhwebi oThengisa izindlu nomhlaba
Yimalini endinokuyenza kwindlu nomhlaba?
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo eMzantsi Afrika
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo eCalifornia
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo eFlorida
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo eneeZatifikethi
Utyalo mali lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kubaQalayo
Ukunyusa iinzuzo zokuLawulwa kweZakhiwo kunye neeNdawo: UkuHlakanya iDatha yokuHlola
Iziseko zohlalutyo lweZindlu
Ukutyala imali kwangaphambili: Phambi kokutyala imali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba
Intro ekuhlalutyeni iipropati zeRhafu yeNgeniso
Utyalo mali lwearhente yorhwebo 101
Ukuhlalutya iReal Estate Deal
Iipropathi zokurenta 101
Ukutyala imali kwiarhente yearhente
Ukuthengisa izindlu nomhlaba: Ukuthetha-thethana nabaThengisi
Izivumelwano zokuThengisa izindlu
Imijelo esixhenxe yeNgeniso yearhente yearhente
Ukuthengisa izindlu nomhlaba: Uqikelelo lweendleko zoLungiso
Ukuthengisa izindlu nomhlaba zizindlu ezizezomhlaba kunye nomhlaba ophuculweyo, nokuba yeyendalo okanye yenziwe ngumntu kubandakanya amanzi, imithi, izimbiwa, izakhiwo, amakhaya, iingcingo kunye neebhulorho.
Ukuthengisa izindlu nomhlaba luhlobo lwepropathi kwaye kwahlukile kwipropathi yakho. Iipropathi zobuqu zizinto ezingaqhotyoshelwanga ngokusisigxina kumhlaba kubandakanya izithuthi, izikhephe, izacholo, ifanitshala kunye nezixhobo zasefama.
Iimfuneko zokuba ngumthengisi wearhente ethengisa izindlu nomhlaba ziyahluka ngokusekwe kurhulumente. Ke, iimfuno ngokubanzi zokuba yiarhente yokuthengiswa kwezindlu zibandakanya:
Iiarhente zokuthengisa izindlu nomhlaba zifumana ilayisensi kumazwe abo hayi kwinqanaba likazwelonke. Ukujonga iimfuno zelizwe lakho, ndwendwela i-ofisi yolawulo lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-intanethi okanye undwendwele uMbutho wamaGosa oMthetho weLayisensi yokuThengisa izindlu (ARELLO) ulawulo lwearhente yolawulo.
Urhulumente ngamnye uneemfuno zakhe:
Izidingo zemfundo (idiploma yamabanga aphakamileyo okanye iGED)
Ukwenza izifundo kwangaphambili kunye neemfuno zelayisensi yangemva
Uviwo kunye nokufaneleka kwiimviwo
Inkqubo yesicelo kunye nemirhumo
Ukujonga ngasemva kunye nokuprintwa kweminwe
Ungalifezekisa njani inqanaba elilandelayo lokufumana ilayisensi
Ukunika ingxelo ngembali yolwaphulo-mthetho
Amanye amazwe anezivumelwano zokufumana iilayisensi kunye namanye amazwe. Ngamanye amagama, ungayifumana ilayisensi kwelinye ilizwe kwaye uyisebenzise kwelinye ilizwe ngaphandle kokuthatha uviwo olongezelelweyo lwelayisensi
Elinye inyathelo eliya ekubeni yiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kukuthatha kunye nokupasa ikhosi yokufumana iphepha-mvume kwangaphambili kwisikolo esaziwayo sezindlu. Emva koko, uya kuhlala kwiimviwo zelayisensi yokuthengiswa kwezindlu.
Urhulumente ngamnye unenani elifunekayo leeyure zezifundo zangaphambi kokufumana iphepha-mvume abafaki zicelo abazakuzithatha. Umzekelo, abafaki zicelo eCalifornia kufuneka bathathe iiklasi ezintathu zokuthengiswa kwezindlu kunye neeyure ezili-135.
Uninzi lwamazwe lubonelela abafaki-zicelo ngeendlela ezininzi zokuhlangabezana neemfuno zekhosi kwangaphambili kubandakanya iikhosi ezikwi-Intanethi kunye neeklasi zabantu abazithengisayo.
Dibana nomyaleli wakho akuchaze ngendlela yokubhalisa kunye nokuhlawulela iimviwo zokufumana ilayisensi. Usenokukhetha ukundwendwela iwebhusayithi kwikhomishini yakho yokuthengiswa kwezindlu.
Uvavanyo lwelayisensi luvavanyo olusekwe kwikhompyuter kwaye inamacandelo amabini. Inxalenye yokuqala yinxalenye yesizwe ngokubanzi kwimigaqo-nkqubo yokuthengiswa kwezindlu kunye nezinto ezenziwayo ngelixa icandelo lesibini licandelo elikhethekileyo likarhulumente elijongana nemithetho yendawo yakho yezindlu.
Olu vavanyo lwelayisensi luza kwifomathi yokhetho oluninzi kunye nenani lemibuzo kunye nexesha loviwo olwahlukileyo ngurhulumente.
Abavavanyi bafumana amanqaku kwicandelo ngalinye ngokwahlukeneyo kwaye abafaki-zicelo kufuneka bafumane amanqaku okuphumelela kuwo omabini amacandelo ukuze baphumelele. Abafakizicelo abangaphumeleliyo kwelinye okanye omabini amacandelo oviwo lwelayisensi baya kuvunyelwa ukuba baphinde babhale uviwo.
Amazwe anemithetho yawo ethile kwinani lamaxesha abafaki-zicelo abanokuphinda balwenze uviwo, ixesha ekufuneka belilindile phakathi koviwo kunye nomhla obekiweyo wokugqiba indawo yokuhlala.
Ukuba uluphumelela uviwo lwelayisensi, ngenisa isicelo kunye namaxwebhu afunekayo kunye neerisithi zomrhumo kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba.
Nje ukuba iarhente yakho yamkele isicelo sakho, baya kuthumela isatifikethi sakho selayisensi yokuthengiswa kwezindlu kuwe nge-imeyile. Ukongeza, igama lakho liya kufakwa kwiwebhusayithi yabo phantsi kwecandelo lomntu onephepha mvume.
Umrhwebi wahlukile kancinane kummeli wearhente yokuthengiswa kwezindlu nangona bobabini bengabathengi nabathengisi abaneshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba.
Ababuyisi mali bangabombutho weSizwe weeRealtors (NAR) kwaye bathobela ikhowudi yokuziphatha. Eli qela lelona qela likhulu lezorhwebo eMelika. I-NAR inamalungu angaphezu kwesigidi esi-1.3 abathengisa, abathengisi, abaphathi bepropathi, abavavanyi, abacebisi, njl.
Ukuba lilungu le-NAR akunyanzelekanga. Ukuba ngaba ungumthengisi, uya kufumana ukuthembeka ngakumbi njengearhente yokuthengiswa kwezindlu.
Zonke iiarhente zezindlu nemihlaba zisebenza phantsi komrhwebi owongameleyo onikwe ilayisensi ngurhulumente ukuba abeke iliso kwintengiselwano yokuthengiswa kwezindlu kunye nokuqinisekisa ukuba abanye abarhwebi bezindlu bayayithobela imigangatho yokuziphatha.
Ngokubanzi, iiarhente zezindlu azenzi umvuzo ngeyure. Kungenxa yokuba umrhwebi ebahlawulela ipesenti yekhomishini ayiqokelelayo kwintengiselwano yeearhente zezindlu.
Iiarhente zokuthengiswa kwezindlu kungacelwa ukuba zihlawule imali yedesika, iifizi zobuchwephesha, amakhadi eshishini, njl.njl.
Inani lemali oza kulenza kwizindlu nomhlaba lixhomekeke kwinani leminyaka yamava, iiyure ezisetyenzisiweyo, iimeko zentengiso, ubuchwephesha kunye nendawo.
Ngokwe-National Association of REALTORS, umvuzo ophakathi wearhente yokuthengiswa kwezindlu ngo-2019 $41,800.
Amaqonga amaninzi anje ngeProp Academy anikezela ngezifundo zasimahla kwiarhente yokuthenga izindlu eMzantsi Afrika. Ngaphandle koko, amanye ala maqonga abiza intlawulo encinci ikakhulu ngezatifikethi abazinikezelayo xa kugqitywe ngempumelelo ikhosi.
Iikhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba eMzantsi Afrika ezinikezelwa yiProp Academy zibandakanya:
Ulawulo lwePropathi yoRhwebo
Intshayelelo kubunini bepropathi yeCPD
Inqanaba lesi-5 le-PDE yokuThengisa izindlu
Inqanaba lesi-4 leNQF yeNene
Ikhosi ye-NQF 6 yoMphathi weZibonelelo
Ngelishwa, akukho zifundo zasimahla kwi-Intanethi ezithengisa izindlu eCalifornia. Usenokuthatha iikhosi zearhente yokuthengiswa kwezindlu kwi-Intanethi kwizikolo eziphambili zearhente yokuthengisa izindlu eCarlifonia kodwa kuya kufuneka uyihlawule.
Ezi zikolo zilandelayo zokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba eCalifornia zibonelela ngezifundo ezenziwa kwi-Intanethi ngokufumana intlawulo encinci:
Ukuthengisa izindlu nomhlaba - $ 119
Imfundo yeKhaplan yokuThengisa izindlu - $ 179
Ivenkile yeEC - $ 129
Ummeli ofanelekileyo - $ 119
Mbition - $ 129
Kukho iikhosi zasimahla kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba ezithengiswayo eFlorida ukufumana imfundo ngakumbi ebaleni. Ezi zifundo zivunyiwe liSebe lezoShishino laseFlorida kunye noMmiselo woBuchule (DBPR).
Yiyo loo nto iikhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba eFlorida zibandakanya:
Ukusebenza kwamandla eMandla kwiKhosi yaBaqeqeshi beZindlu
Ukugcina amandla eMandla kwiKhosi yaBasebenzi beZindlu
Amanqaku oMbane weKhaya weKhosi yeeNgcali ngeeNdawo
Apha ngezantsi kukho iikhosi zasimahla kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu onokuthi uthathe kwaye ufumane isatifikethi emva kokugqiba izifundo ngempumelelo:
Uninzi lwabantu abazizityebi emhlabeni bakwindawo yokuthengisa izindlu nomhlaba. Nangona kunjalo, umntu ophakathi ufumanisa ukuba iyoyikisa kakhulu ukuya kuthengiso lwezindlu.
Ke ngoko, le khosi iya kukufundisa indlela yokuba ngumtyali mali wokuthengisa izindlu nomhlaba. Ikhosi iphonononga iindidi ezahlukeneyo zeasethi kunye neeasethi abajolise kuzo abatyali mali kunye nesizathu sokujolisa kubo.
Uya kufunda kwakhona ngendlela yokuvavanya ukujongana ngokulula ngexesha elikhawulezayo njengeengcali zentsimi. Ukongeza, uya kuyazi eyona ngozi iphambili ekufuneka uyiphephe ngelixa utyala imali kwintengiso yezindlu.
Le khosi iya kukufundisa neengcebiso zeentlobo ezahlukeneyo zeepropathi ezinje ngeendawo zokuhlala, ukuzigcina ngokwakho, iipaki zasekhaya ezihambayo, amaziko okuthenga kunye nezakhiwo zeofisi. Ukuthengisa izindlu nomhlaba kwabaqalayo yenye yeekhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi.
Le khosi ekwi-Intanethi ifundiswa nguPeter Harris.
Ubude bexesha: Ukuzihambela
indawo: Udemy (kwi-Intanethi)
Le khosi iya kufuna ukuba uqhubeke neprojekthi usebenzisa uhlalutyo lwedatha ukucebisa ngeendlela zendlela i-Watershed Property Management Inc ezinokuthi ziyiphucule ngayo inzuzo yayo. Inkampani ilawula iipropathi ezininzi zokuhlala e-US
Ukugqiba le projekthi, kuya kufuneka ufumane idatha malunga nezinto ezifanelekileyo eziza kunceda kuhlalutyo lwakho. Emva koku, uya kutsala izakhono zedatha yakho entsha ye-MySQL ukufumana idatha kwiziko ledatha yezindlu. Emva koko, uya kuphumeza uhlalutyo lwedatha kwi-Excel ukubonisa ezona ndlela zingasetyenziselwa ukuhambisa amanzi ukunyusa ingeniso kunye nokunyusa inzuzo ngelixa ulawula umngcipheko obandakanyekayo.
Emva koko, uyakwenza ideshibhodi yetafile ukubonisa abaphathi beenkampani iziphumo zohlalutyo.
Ubude bexesha: iiveki 7
indawo: IYunivesithi yaseDuke ngeCursera (kwi-Intanethi)
Ukuze ube yinkosi kwaye uphumelele kwicandelo elitshintsha rhoqo lezindlu nomhlaba, kuya kufuneka ubenezakhono zohlalutyo.
Kule khosi, uya kufunda ngendlela yokwakha inqanaba lobuchwephesha bohlalutyo lokuthengiswa kwezindlu ezinokukunceda uvavanye amathuba otyalo mali, iipotifoliyo kunye nembuyekezo. Uya kufunda malunga nezixhobo zasimahla onokuzisebenzisa ukuphonononga ukurentwa kweyunithi enye ukulungisa kunye neeflips kunye neeyunithi ezininzi zokuhlala.
Ukongeza, uya kwazi ukuba uhlalutyo lungena phi kunye neendlela ezisisiseko zotyalo-mali. Uya kwazi nokuba ungalinganisa njani imbuyekezo yakho kunye nefuthe lenkxaso mali. Le khosi yenye yeekhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi.
Iziseko zohlalutyo lweearhente zifundiswa nguSymon He.
Umhla wokuqala: Ukuzihambela
Ubude bexesha: iiyure 6
indawo: I-LinkedIn Learning (kwi-Intanethi)
Le khosi yasimahla yokuthengiswa kwezindlu kwi-Intanethi yenzelwe abantu abatsha kutyalo mali. Kule khosi, uya kuyazi yonke into efunekayo ukwenza utyalo-mali lwakho lokuqala lokuthengiswa kwezindlu.
Uya kufunda kwakhona indlela yokuphuhlisa isicwangciso sotyalo-mali kunye nendlela yokusebenzisa ubuchule bokuthengisa ngokuthelekisa ixabiso lepropathi. Ikhosi iya kukunika ukuqonda okufanelekileyo malunga nokuba izigaba ezahlukeneyo zentengiso yezindlu kunye nomhlaba zinokuba nefuthe njani kuwe njengomtyali mali. Ulwazi olufunyenwe koku luyakunceda ukuba ube ngumtyali mali wearhente yokuthenga izindlu nomhlaba.
Ikhosi ifundiswa nguSymon He.
Ubude bexesha: iiyure 5
Kule khosi, uya kufunda iziseko zohlalutyo lotyalo-mali, ngakumbi kutyalo-mali lwepropathi yengeniso.
Ikhosi iya kukunika ukuqonda okufanelekileyo kweemetrikhi eziphambili ezisetyenziselwa ukuhlalutya iipropati zengeniso yerenti. Uya kufunda kwakhona ukuba ungazisebenzisa njani iimodeli zotyalo-mali ezikumgangatho wobuchule ukuze ujonge iiflip okanye ukurhweba.
Ukongeza, ikhosi iphonononga eyona nto iphambili kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu. Uya kwazi izicwangciso zobuchule zotyalo mali kunye nokuhlalutya i-flix kunye namathuba otyalo mali.
Intro ekuhlalutyeni iipropati zeRhafu yeNgeniso yenye yeekhosi zasimahla kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu.
Le khosi sisikhokelo sabaqalayo esibanzi kumagumbi okulala, ukuthengisa, iofisi, kunye notyalo mali lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba.
Ngale khosi, uya kufumana ulwazi kunye nezakhono ezifunekayo zokufumana umsebenzi onenzuzo kutyalo-mali lokuthengisa izindlu nomhlaba. Kananjalo uya kwazi iimetrikhi eziphambili kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu ezizisebenzisayo iingcali zotyalo-mali ukuhlalutya izivumelwano.
Le khosi iya kukufundisa nendlela yokuvavanya iipropathi zokuthengisa izindlu nomhlaba ngaphambi kokuzithengela ngokwakho okanye abathengi. Ukongeza, uya kuba nombono wokuba ungawasebenzisa njani amatyala kunye nokulingana ukuthenga iipropathi kunye nokwandisa inzuzo kutyalo-mali lwakho lokuqala.
Utyalo-mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba 101 yenye yeekhosi zasimahla kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu kunye neziqinisekiso.
Le khosi ifundiswa nguJustin Kivel.
Ubude bexesha: iiyure 3-4
Unokuba namava eminyaka kunye nezakhono kwizindlu nomhlaba kunye nemali kodwa ungangaphumeleli. Impumelelo inokufikelelwa kuphela xa usazi isiqwenga sepropathi esinexabiso elifanelekileyo. Ke ngoko, ngaphambi kokwenza nayiphi na imali, zama ukuqonda ukuba ungayibhatala malini ipropathi, uyithengisa kangakanani, kunye nenzuzo omele ukuyenza.
Ke, kule khosi, uya kufunda ukuba ungawaqhuba njani amanani nakweyiphi na ipropathi ukuze wazi ukuba uza kuyenza inzuzo okanye ilahleko. Uya kufunda kwakhona ukuhlalutya isivumelwano kumntu okanye kwi-intanethi, ubale ixabiso emva kokulungiswa, kwaye wenze uphando nge-MLS.
Uya kufunda ukuba ukufumanisa njani ukungahambi kakuhle, ujonge amakhaya buqu, kwaye uvale izivumelwano ezilungileyo. Ikhosi yenye yeekhosi zasimahla zokuthengiswa kwezindlu ezikwi-intanethi ezibonelela ngesiqinisekiso sakuba sigqityiwe.
Ubude bexesha: Ngaphantsi kweyure e-1
Le khosi ifundisa indlela yokusebenzisa iindlela ezichanekileyo zokuthenga irente ezihamba ngemali. Uya kufunda indlela yokuchonga imakethi yakho ekujolise kuyo kunye nendlela yokusebenzisa isazisi sokujongana nokujonga iipropathi. Ukongeza, uya kuzuza amava ekusebenzeni ngokuthe ngqo nakwezokuqesha.
Ukugqitywa kwekhosi, uya kuba nolwazi olunzulu lokuqalisa utyalo-mali lwakho lokurenta.
Le khosi ifundiswa yi-WealthFit.
Le khosi iya kukufundisa indlela yokwenza utyalomali lokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba. Ukusuka kule khosi, uya kufunda ukuba ungawasebenzisa njani amava abanye abatyali mali ukuze wakhe isinyusi esinamandla.
Uya kufumanisa ukuba ulungiselela njani ukukhula kwishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba kwaye uthathe isigqibo ngeemodeli zotyalo mali ezizizo oza kuzisebenzisa.
Ukutyala imali ngokuthengisa izindlu nomhlaba yenye yeekhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi.
WealthFit ilawula le khosi.
Iiarhente ezininzi zokuthengisa izindlu nomhlaba zihlala zingenantembelo ngomnxeba xa ziphendula imibuzo evela kumthengi kumzamo wokuvala isivumelwano. Oku kubonisa ukuba banonxibelelwano olubi.
Ngesi sizathu, le khosi yenzelwe ukukufundisa indlela yokuqhuba iifowuni zokuthengisa izindlu nomhlaba njengengcali. Uya kufunda kwakhona ukuba ungakha njani iphepha elikhokelayo lomthengisi elinokuthi likuncede ugcine umkhondo weenkcukacha kwaye uphucule ireyithi oyivalelayo.
Ukuthengisa izindlu nomhlaba: Ukuthetha-thethana naBathengisi yenye yeekhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi.
Ikhosi ineesilabhasi kubandakanya
Imigaqo esisiseko yokuThetha-thethana kunye noQikelelo
IiNkcaso zoMthengisi eziQhelekileyo ezingama-48
Inokoyikisa kakhulu ukusebenza kwizivumelwano kuba zithwele amaxwebhu anzima. Awungekhe uphumelele njengomtyali mali wezindlu okanye umhlaba ukuba awulungelanga ukusebenza kumaxwebhu esivumelwano.
Ke ngoko, le khosi iya kukufundisa indlela yokujonga kwakhona nokwenza iikhontrakthi zokuthengiswa kwezindlu. Uya kufunda malunga neyona mvumelwano ixhaphakileyo yotyalo mali yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye nendlela yokufikelela kumaxwebhu abo.
Le khosi iya kukufundisa namagatya amahlanu ekufuneka uwongeze kwisivumelwano ukuze ubophe ngokusemthethweni. Uya kufunda kwakhona amacandelo aphambili okuthenga kunye nezivumelwano zentengiso kunye nendlela yokuhamba ngexesha likaxakeka.
Ukutyala imali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunomvuzo kwaye unokwenza ingeniso enkulu kwintengiso yezindlu ngeendlela ezininzi.
Ke, le khosi iya kukufundisa ngeendlela onokuzisebenzisa ukwandisa inzuzo kwintengiso yezindlu. Ikhosi iya kukufundisa neendlela ezisixhenxe zokwenza imali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye nendlela onokuthi uqalise ngayo.
Imijelo esixhenxe yeNgeniso yeArhente yokuThengisa izindlu yenye yeekhosi zasimahla zokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi.
Ihlala iyala xa ufumanisa umonakalo kwipropathi eya kukuhlawula imali ethile emva kokuba uyithengile loo propati.
Ke, le khosi iya kukufundisa indlela yokwenza izigqibo ezingcono zotyalo-mali ngokufumanisa iimpazamo ngaphambi kokuthenga ipropathi. Uya kufunda indlela yokuvavanya yonke imiba yepropathi ukusuka ekhitshini ukuya kwinkqubo ye-HVAC. Oku kuyakunceda ukuba ungadibani nenkcitho engeyomfuneko emva kokufumana ipropathi.
Iikhosi ze-18 zasimahla zoLawulo kwi-Intanethi ezineZatifikethi
Iikhosi ezingama-300 + zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
Iikhosi ezili-12 eziPhambili kwi-Intanethi kwiNtengiso eneZatifikethi
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaBafikisayo
izifundo zekhompyutha Iikhosi ze-Intanethi Funda iSakhono kwi-Intanethi funda kwi-intanethi
Post Previous:Imisebenzi ephezulu yokuhlawula eyi-45 eCarlifonia
Okulandelayo Post:I-11 yeeScholarship eziPhezulu zeZifo eziZenzekelayo
February 23, 2022 kwi 3: 48 pm
I-Merci pour cet article très complet et surtout en français très clair 🙂